Wafdi uu hogaaminayo madaxweyne Farmaajo oo si qarsoodi ah Muqdisho dib ugu soo laabtay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wafdi uu hogaaminayo madaxweyne Farmaajo oo si qarsoodi ah Muqdisho dib ugu soo laabtay
Wafdi uu hogaaminaayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, kadib markii ay kasoo kicitameen magaalada Jiddah ee dalka Boqortooyadda Sucuudi Carabiya.
Wafdiga madaxweyne Farmaajo oo labadii maalmood ugu dambeysay ku sugnaa dalka Sucuudiga, ayaa halkaasi kulamo kala duwan kula yeeshay Boqorka dalkaasi Boqor Salmaan Bin Cabdulcasiis Al Saud iyo wasiiro katirsan xukuumadda Sucuudiga, kadib markii uu marti-qaad ka helay.
Kulanka kadib wafdiga madaxweyne Farmaajo ayaa waxay tageen Xaramka, iyagoona halkaasi u tagay cumreysi iyo duco ay usoo duceeynayeen shacabka Soomaaliyeed, inuu dhibta, colaadda iyo abaaraha Ilaahay ka dul-qaado.
Madaxweyne Farmaajo ayaa soo dhaweyntiisa magaalada Muqdisho aheyd mid ka duwan sida hore loo soo dhaweyn jiray madaxdii isaga ka horeeysay.
Ilo lagu kalsoonaan karo aynu ka heleyno xarunta madaxtooyadda ayaa sheegaysa in madaxweyne Farmaajo uu lasoo xiriiray guddoonka baarlamaanka iyo golaha wasiirada ee xilka sida KMG u haaya inaan garoonka Aadan Cadde lagu soo dhaweynin, islamarkaana ay howshooda sida caadiga ah u wataan.
Sidii hore looga bartay waddooyinka magaalada Muqdisho ayaa la xiri jiray xilliyadda ay imaanayaan madaxda sare ee dalka, waxayna maanta ahayd mid taasi ka duwan.
Dhamaan waddooyinka Muqdisho ayaa maanta ahaa kuwa si caadi ah u furnaa, islamarkaana aanay jirin waddo la xiray, waxaana wafdiga madaxweyne Farmaajo qeybta VIP-da ee garoonka Muqdisho kusoo dhaweeyay dhowr xildhibaan iyo qaar ka mid ah shaqaalaha madaxtooyadda Soomaaliya.
Waa markii ugu horeeysay oo aan waddooyinka Muqdisho la xirin, xilli uu magaalada imaanayo mas’uul sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, waxaana xilliyada soo socdo la filayaa in madaxweyne Farmaajo u wariyaasha kula hadlo xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.